यसरि हुन्छ कोरोनाको उपचार - समय-समाचार
(Wednesday, 20th January 2021)
यसरि हुन्छ कोरोनाको उपचार
५ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०२:०५
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा फोकस छ । त्यही अस्पतालको आइसोलेसनमा छन् ५ जना कोरोना संक्रमित । एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा छिटो सर्ने भएकाले संक्रमितलाई छुन मिल्दैन ।त्यसो हो भने डाक्टर र नर्सले कसरी उपचार गर्छन् भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो ।
आहा ! टेकु प्रयोगशालाको लोभलाग्दो मनोबल
कसरी उपचार गर्ने त ?
टेकु अस्पतालले आइसेलेसनमा विशेष सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । एउटा आइसोलेसन कोठामा एक जना राखिएको हुन्छ ।
‘उनीहरूको लक्षणको आधारमा उपचार गरिन्छ’, अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले भने, ‘भाइरसको कुनै औषधि त छैन तर लक्षण कस्तो छ ? के समस्या छ ? त्यसको आधारमा औषधि दिने, नदिने निर्णय लिन्छौँ ।’
टेकु अस्पतालमा डेढ घण्टा
डाक्टर/नर्सले छुनै पर्छ
संक्रमितलाई नछोई उपचार गर्न सकिँँदैन । बिहान एक पटक डाक्टर, नर्सको टिमको राउण्ड हुन्छ । संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा डाक्टर, नर्सले फोनबाट जानकारी लिन्छन् । आफूलाई समस्या भएका संक्रमितले पनि फोनबाटै डाक्टर, नर्सलाई जानकारी गराउँछन् ।
‘संक्रमितको एलएफटी, आरएफटी, सीबीसी हेरेर त्यसको आधारमा उनीहरूको स्वास्थ्य कस्तो छ, मूल्याङकन गरिन्छ’, उनले भने, ‘संक्रमितसँग डाक्टर र नर्सले फोन, भिडियोबाट कुरा गर्ने व्यवस्था पनि छ ।’
डाक्टर-नर्सका व्यथा : परिवारको दबाब र जिम्मेवारीक‍ो तनाव
डाक्टर र नर्सले पीपीई लगाएर उपचार गर्छन्
संक्रमितलाई छोएर उपचार गर्नुपरेमा डाक्टर र नर्सले पीपीई लगाउँछन् । परीक्षणका लागि स्वाब निकाल्नुपरे, अक्सिजन र भेन्टिलेटरको प्रयोग गर्नुपरेमा डाक्टर र नर्सले पीपीई लगाउँछन् ।
रोबोटबाटले पुर्‍याउंँछ खाना, औषधि र पानी
टेकु अस्पतालमा संक्रमितका लागि औषधि, पानी र खाना रोबोटले पुर्‍याउँछ । धेरै भेटघाट नगर्दा उपयुक्त हुने भएकाले रोबोट राखिएको हो । यसले डाक्टर, नर्स र संक्रमितलाई सहज बनाएको छ ।
टेकुका चिकित्सक जसले परिवार बिर्सेर कोरोना आशंकित मात्रै हेरिरहे
रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज
संक्रमितको रिपोर्ट नेगेटिभ नआएसम्म अस्पतालमै राखेर उपचार गरिन्छ । २ पटक नेगेटिभ आएपछि मात्र डिस्चार्च गरिने निर्देश डा. राजभणडरीले बताए । डिस्चार्ज भएको अर्को हप्ता परीक्षणका लागि फेरि पीसीआर परीक्षण गरिन्छ । घर गएर पनि कम्तीमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमै बस्नुपर्ने हुन्छ ।
(Copied from Shilapatra)
विश्वभर ६ करोड ९२ लाख संक्रमणमुक्त, २० लाख ६३ हजारको मृत्यु
७ माघ २०७७, बुधबार ०८:२१
नेपालमा तीन साताभित्र कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन सुरु गर्ने सरकारको तयारी
६ माघ २०७७, मंगलवार २१:०४
राष्ट्रपति जो वाइडेनको सपथग्रहण समारोहलाई लक्षित गरेर अमेरिकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारियो
७ माघ २०७७, बुधबार ०६:४८